MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardM-Learning FAQ MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
VAS » M-Learning
၁။ M-Learning ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။
ဤ M-Learning ဝန်ဆောင်မှုသည် ဘာသာစကားသင်ခန်းစာစီးရီးများမှတစ်ဆင့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် MPT သုံးစွဲသူများအား ဖိတ်ကြားထားသော ပညာရေးဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရေးပေါ်တယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှု၌ (SMS မှတစ်ဆင့် တစ်နေ့လျှင် တစ်စောင်လက်ခံရရှိမည့်) ဘာသာစကားလေ့လာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများအပြင် HTML5 ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ခွင့်ပါ ပါဝင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် သုံးစွဲသူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးနှင့် အဆင့်အမျိုးမျိုး (အခြေခံ၊ အလယ်အလတ်၊ အဆင့်မြင့်) တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသည့်အခါ (အခွန်အားလုံးအပါအဝင်) တစ်ရက်လျှင် ၁၅၈ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ ပထမအကြိမ် အခပေးစာရင်းသွင်းပြီးသည့်အခါ သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုကို ရ ရက်တာ အခမဲ့သုံးစွဲခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့ကာလမကုန်ဆုံးမီ စာရင်းသွင်းထားသူများထံသို့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော အသိပေးချက်များ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူတွေ သုံးစွဲခွင့်ရှိသလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုကို MPT သုံးစွဲသူအားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင်၊ သို့မဟုတ် ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင်ထံမှ ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူကို ဖုန်းအမှန်တကယ်သုံးစွဲသူ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အခပေးသုံးစွဲသူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
၅။ M-Learning ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုပယ်ဖျက်နိုင်မလဲ။
ဝန်ဆောင်မှု ပယ်ဖျက်ရန် အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။
I. 8282 သို့ STOP ဟု ပို့ပါ။
II. ဝန်ဆောင်မှုပယ်ဖျက်ပြီးနောက် သုံးစွဲသူသည် အတည်ပြု SMS လက်ခံရရှိမည်။
၇။ M-Learning အတွက်လင့်ခ်ကို ဘယ်မှာ ရှာလို့ရနိုင်မလဲ။
http://engclass.up.st/ ဟူသည့်လင့်ခ်မှ M-Learning ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူအနေနှင့် 8282 သို့ INFO ဟု ပေးပို့ပြီးလည်း ပေါ်တယ်၏လင့်ခ်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
၉။ M-Learning ပေါ်တယ်က နှေးနေပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။/ ပေါ်တယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ချိန်မှာ တို့ထိတာ၊ ကလစ်နှိပ်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
a) ပထမဆုံးအနေနှင့် စာမျက်နှာကို ပြန်တင်ပါ။ သို့မဟုတ် ဘရောက်ဇာကို ပိတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖွင့်ပါ။
b) သင့်ဖုန်း၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု၊ သို့မဟုတ် WIFI အလုပ်လုပ်ရဲ့လား ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
c) ဖုန်းအင်တာနက် အသုံးပြုနေပါက အင်တာနက်သုံးစွဲ၍ရနိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ (လိုအပ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူထံ ဆက်သွယ်စစ်ဆေးပါ။)
d) ဘရောက်ဇာကို “ကိုယ်ပိုင်ဝင်းဒိုး” သို့မဟုတ် “လျှို့ဝှက်အနေအထား” နှင့် သုံးစွဲနေတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနှင့်။
e) သင့်ဖုန်း နှေးနေလျှင် မလိုအပ်ဘဲ ဖွင့်ထားမိသော ဝင်းဒိုးများ၊ စာမျက်နှာများကို ပိတ်ပါ။ ဝင်ရောက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သော အထူးပလတ်အင်များ၊ အင်တီဗိုင်းရပ်နှင့် ဖိုင်းယားဝေါဆော့ဝဲများကို ပိတ်ပါ။
၁၁။ M-Learning ဝန်ဆောင်မှုကို ဖုန်း/တက်ဘလက်တစ်လုံးအပြင် တခြားကနေရော ဝင်လို့ရမလား။
ရပါသည်။ M-Learning ပေါ်တယ်လင့်ခ်နှင့် သင့်၏အထောက်အထားအချက်အလက်များကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့်ကိရိယာမှာမဆို ပေါ်တယ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂။ ဝန်ဆောင်မှုက ဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုအခပေးစာရင်းသွင်းရမှာလဲ။
(WiFi, 2G, 3G သို့မဟုတ် 4G) အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အခပေးစာရင်းသွင်းမှုအဆင့်မှုများကို အောက်တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
a) 8282 သို့ ON ဟု ပို့ပါ။
b) စာရင်းသွင်းမှု အောင်မြင်ပြီးသည့်နောက်တွင် သုံးစွဲသူသည် အောက်ဖော်ပြပါအတည်ပြု SMS ကို လက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ –
ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်ရမည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (သုံးစွဲသူအိုင်ဒီ/စကားဝှက် နှင့် ပေါ်တယ်လင့်ခ်)
အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာ – တစ်နေ့တာလေ့လာရမည့်အကြောင်းအရာ
၄။ လက်ခံရရှိသော SMS အတွက် ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ။
8282 မှ သုံးစွဲသူ လက်ခံရရှိသော SMS များအားလုံးမှာ အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း နေ့စဉ်ကြေးအနေနှင့် တစ်ရက်လျှင် ၁၅၈ ကျပ် ကောက်ခံသွားပါမည်။
၆။ User ID & စကားဝှက်ကို ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ။
M-Learning ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်ရမည့် ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားအချက်အလက်များကို ကနဦးအခပေးစာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့် သုံးစွဲသူထံ ပေးပို့သွားပါမည်။ သုံးစွဲသူအနေနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို 8282 သို့ PASSWORD ဟု ပေးပို့ပြီး ပေါ်တယ်၏လင့်ခ်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။ သင်၏ဖုန်းနံပါတ်မှာ သင်၏ သုံးစွဲသူအထောက်အထားအချက်လက် (ID) ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ M-Learning ပေါ်တယ်ကို ဘာလို့ ဝင်မရတာလဲ။
သုံးစွဲသူအနေနှင့် ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် HTML5 ကို ပံ့ပိုးသော ဘရောက်ဇာ လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြားအကြောင်းအနေနှင့် အခကြေးပေးချေရာတွင် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်ကြေး ပေးချေရန်အတွက် မိမိဖုန်းတွင် ငွေလက်ကျန် အလုံအလောက်ရှိရဲ့လား ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ သင့်ဖုန်းငွေလက်ကျန်မှ နေ့စဉ်ကြေး ကောက်ခံပြီးသည်နှင့် ပေါ်တယ်ပေါ်သို့ အပြည့်အဝ ဝင်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
၁၀။ ပေါ်တယ်သို့ အလွယ်ဝင်ရောက်နိုင်အောင် M-Learning ပေါ်တယ်စာမျက်နှာကို ဖုန်းထဲက တစ်နေရာရာမှာ သိမ်းထားလို့ရမလား။
သင့်ဖုန်း/တက်ဘလက်၏ ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင် ပေါ်တယ်၏ရှော့ကတ်ကို ဖန်တီးထားနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရန် ဘရောက်ဇာ၏ ဆက်တင်အတွင်းဝင်ပြီး “Add to homescreen” ကို နှိပ်ပါ။ အင်တာနက်ကို ဖွင့်ထားဖို့ကိုတော့ မမေ့ပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက လင့်ခ် အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
၁၂။ ကျွန်တော် မက်ဆေ့ချ် ပို့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းပြန်မက်ဆေ့ချ် ပြန်မရပါဘူး။
ယင်းသို့ အကြောင်းပြန်မက်ဆေ့ချ် ပြန်မရသည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါညွှန်းကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
a) ဖုန်း၏မက်ဆေ့ချ်ဝင်ဆံ့မှုပမာဏ ပြည့်သွားပြီးလား၊ မက်ဆေ့ချ်သစ် လက်ခံရန် မဲမိုရီ မရှိတော့ဘူးလားဆိုတာ စစ်ပါ။ နေရာလွတ်ရရှိစေရန် မက်ဆေ့ချ်တချို့ကို ဖျက်ပစ်ပါ။
b) မက်ဆေ့ချ်ကို ပို့ရမည့်နံပါတ်ဆီ ပို့မထားမိသည့်အခါ SMS အသစ်တစ်စောင်ရေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုထံမှ မက်ဆေ့ချ်လာသည့်နံပါတ်ဆီ ပြန်ပို့ပါ။
c) လောလောဆယ် မိမိအနီးဝန်းကျင်၌ လိုင်းကျပ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခေတ္တစောင့်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်အတွင်း မက်ဆေ့ချ် ဝင်မလာပါက SMS အသစ်တစ်စောင် ထပ်ပို့ပါ။